Nosokafan'i Nouvelle-Zélande ny sisintaniny ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena miaraka amina fomba mora ampiharina amin'ny Internet mba hitakiana amin'ny alàlan'ny eTA na Electronic Travel Autorisation. Ity fitondrana ity dia natomboka tamin'ny Aogositra 2019 avy amin'ny Governemantan'i New Zealand. The New Zealand eTA Visa mamela ny mponina ao Firenena 60 Waiver Visa hahazoana ity Visa Online ity. Ny firenena New Zealand Visa Waiver dia fantatra amin'ny anarana hoe Visa Free. Ity eTA Visa ity dia manampy amin'ny fiarovana ny mpitsidika iraisam-pirenena sy ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany mba hahafahan'ny governemanta mitazona sy mitahiry ny tontolo iainana sy ireo toerana fizahan-tany notsidihin'ireo mpitsidika an'i New Zealand.
Ny mpandeha rehetra tonga any Nouvelle-Zélande amin'ny dia fohy dia mila mangataka New Esta Esta, ao anatin'izany ny mpiasa ao amin'ny sambo Airlines sy Cruise. Tsy misy fepetra takiana amin'ny:
Tsidiho ny masoivohon'i Nouvelle Zélande.
Consulat any Nouvelle Zélande na High Commission.
Arosoy ny pasipaoronao amin'ny fametahana visa any Nouvelle Zélande amin'ny endrika taratasy.
Manaova fotoana hanaovana dinidinika.
Aloavy amin'ny fisavana, vola na mihoatra amin'ny kaontera.
Ny dingana iray manontolo dia mety ho feno amin'ity tranonkala ity amin'ny alàlan'ny tsotra sy milamina Taratasy fangatahana New Zealand Esta. Misy fanontaniana tsotra vitsivitsy izay mila valiny amin'ity takelaka fampiharana ity. Ity takelaka fangatahana ity dia mety ho feno ao anatin'ny roa (2) minitra eo ho eo ataon'ny ankamaroan'ny mpangataka nanombantombana nataon'ny Governemanta New Zealand alohan'ny nandefasana azy. Tao anatin'ny 72 ora dia nisy fanapahan-kevitra noraisina avy amin'ny tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina ao amin'ny Governemanta New Zealand ary hampandrenesina anao ny fanapaha-kevitra sy ny fankatoavana amin'ny alàlan'ny mailaka.
Azonao atao ny mitsidika ny seranam-piaramanidina na sambo fitsangantsanganana miaraka amina kopia elektronika malefaka an'ny New Zealand eTA Visa na azonao atao pirinty amin'ny taratasy ara-batana ary ento any amin'ny seranam-piaramanidina. Mariho fa ity New Zealand Esta ity dia manan-kery hatramin'ny roa taona.
Rehefa nametraka visa any New Zealand eTA Visa ianao dia tsy mangataka pasipaorinao amin'ny sehatra rehetra, fa te hampahatsiahy anao izahay fa tokony hisy pejy banga roa (2) amin'ny pasipaoronao. Izany dia takian'ireo tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina amin'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny firenenao mba hahafahan'izy ireo mametraka takelaka fidirana / fivoahana amin'ny pasipaoronao amin'ny dianao mankany New Zealand.
Iray amin'ireo tombony ho an'ireo mpitsidika any Nouvelle-Zélande ny hoe tsy hampiala anao hiala amin'ny seranam-piaramanidina ny manamboninahitra New Zealand Government Border satria ny fisavana ny fangatahanao dia vita alohan'ny hahatongavanao, ary tsy afaka hiverina any amin'ny seranam-piaramanidina / sambo fitsangantsanganana koa ianao. any amin'ny firenenao satria hanana visa eTA Visa any Nouvelle Zélande ianao. Mpitsidika maromaro no hiverina any amin'ny seranam-piaramanidina raha tsy efa nisy ny fahatafintohinana natao taminy tao amin'ny firaketany.
Raha mbola misy fisalasalana sy fanazavana fanampiny ilaina ianao, mifandraisa aminay Mpiasa birao fanampiana.